‘हेडसर’ सिण्डिकेट - Pradesh Today ‘हेडसर’ सिण्डिकेट - Pradesh Today
असार ०६, २०७५ प्रकाश डाँगी
दाङ, ५ असार ।
पदमा रहनेहरुको लागि निश्चित समय सीमा तोकिएको हुन्छ, नीति बनाइएको छ । तर विद्यालयहरुका केही प्रधानाध्यापकहरुले लामो समयसम्म विद्यालयहरुमा आफू नै प्रधानाध्यापक भैरहने प्रयत्न गरिहेको देखिन्छ । जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा यो अवस्था देखिएको छ ।
विद्यालयमा प्रधानाध्यापकले आफ्नो सिन्डिकेट कायमै राखेको गुनासोसमेत अहिले बढिरहेको छ । वर्षाैसम्म सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाए पनि शिक्षा त्यो पनि सामुदायिक विद्यालयका प्रअहरुको सिन्डिकेटतर्फ भने कसैको चासो देखिएको छैन । सिन्डिकेटले लामो समयदेखि विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापकहरुको हालीमुहाली कायम रहदै आएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा समेत परेको देखिन्छ । कतै राम्रो काम पनि भएको छ भने कुनैमा आजीवन प्रअ सिन्डिकेटले बर्बाद बनाएको छ ।
शिक्षा नियामावलीमा प्रधानाध्यापक छान्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहँुदै पनि प्रधानाध्यापकहरु कुर्सीबाट टसमस गर्न मान्दैनन् । न त अरु शिक्षकहरुले प्रअको बारेमा बोल्न नै सक्छन् । बरु विद्यालयमा कक्षा एकदेखि अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु आफ्नो अध्ययन पूरा गरेर त्यही विद्यालयमा शिक्षक बन्न आउँदासमेत विद्यालयको प्रधानाध्यापक फेरिएका हुँदैनन् । विद्यालयहरुमा गठन भएका विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघहरुसमेत परिवर्तन भैसक्छन् । तर तिनै विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु भने लामो समयसम्म फेरिदैन । बरु आएका विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई आफू अनुकूल बनाइसकेका हुन्छन् ।
शिक्षा नियमावलीमा प्रधानाध्यापक छान्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कुराहरु देखाउँदै एउटै प्रधानाध्यापकले विद्यालयलाई एकलौटी र एकाधिकार शैलीमा सिन्डिकेट लादी रहेको हुन्छ । शिक्षा नियमावलीको व्यवस्थालाईसमेत कुनै प्रवाह नगरी विद्यालयमा भएका र योग्यता पुगेका योग्य, दक्ष, उर्जाशील अन्य शिक्षकलाई नियुक्ति गर्न कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
केही विद्यालयहरु बाहेक अधिकांश विद्यालयलाई गतिलो तरिकाले सञ्चालन गर्न सकिरहेको देखिदैन । न त विद्यालयको शिक्षण गुणस्तरमा एकाधवाहेक अधिकांश विद्यालयहरुलाई फड्को मार्न मद्दत पु¥याएको देखिन्छ । तर पनि उनीहरु राजनीतिक तथा आफूभित्र रहेको सिण्डिकेट सोंचका कारण कुर्सी छोड्न नमानिरहेको विद्यालयकै शिक्षकहरुले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । त्यस्ता प्रधानाध्यापकहरुलाई विभिन्न कारणले परिवर्तन गर्न जरुरी भएको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् ।
वर्षाैसम्म सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाए पनि शिक्षा त्यो पनि सामुदायिक विद्यालयका प्रअहरुको सिन्डिकेटतर्फ भने कसैको चासो देखिएको छैन । सिन्डिकेटले लामो समयदेखि विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापकहरुको हालीमुहाली कायम रहदै आएको छ ।
प्रअ सिन्डिकेटका विकृति
वर्षौदेखि विद्यालयमा एउटै प्रधानाध्यापकको हालिमुहालीले गर्दा विद्यालयको स्तर खस्किदो अवस्थामा पुग्नु, उनीहरुले विद्यालयमा आउने मसलन्द खर्च, भौतिक सुधार बजेट, भवन निर्माण लगायतको रकममा उनीहरु सधै लिप्त भैरहनु, निम्न माध्यमिकसम्मका विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारीको जिम्मा आफ्नै हातमा लिने ब्यवस्था हुनु, विद्यालयको ब्यवस्थापन, प्रशासन, विद्यार्थीको सुधारभन्दा पनि विद्यालय भित्रका ठेक्कादारी काममा सधै संलग्न हुने र त्यस्ता प्रधानाध्यापकहरुले विद्यालय आफ्नो बाउको सम्पत्तिजस्तो ठान्ने विद्यालयमा भएका अन्य शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कुनै जिम्मेवारी नदिनेजस्ता कारणहरुले गर्दा लामो समयदेखि विद्यालयमा लाद्दै आएको प्रधानाध्यापकको सिन्डिकेट तोड्न आवश्यक रहेको विभिन्न सरेकारवाला निकायहरुको धारणा रहेको छ ।
कतिपय प्रधानाध्यापकहरुले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई समेत प्रभावमा पारी विद्यालयमा आफ्नै मनोमानी गर्ने विभिन्न शीर्षकमा विद्यालयमा आउने बजेटहरू लुकाउने, अरुलाई देखाउन नखोज्ने, कमिसनको चक्करमा लाग्नेसमेत गरेको विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले आरोप छ । उनीहरुले विद्यालयमा कहाँबाट के कति बजेट आउँछ ? सो समेत अरुलाई जानकारी नै नदिने गरेको विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरुको गुनासो रहने गरेको छ ।
औंलामा गन्ने केही प्रधानाध्यापक बाहेक अधिकांश प्रधानाध्यापकहरुले विद्यालयलाई ध्वस्त पार्नै काम गरिरहेका छन् स्वयम् शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको गुनासो रहेको छ । यस्ताखालका गतिविधिहरुलाई हेर्ने हो भने शिक्षामन्त्रालय, स्थानीय तहहरुले यसतर्फ ध्यान पु¥याएर प्रधानाध्यापकहरुको यस्तो सिन्डिकेट तोड्न ऐन नियमावली अनुरुप उर्जावान, योग्य, दक्ष, पारदर्शी शिक्षकहरुबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरी शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
के छ दाङको अवस्था ?
दाङ जिल्लामा सञ्चालन आएका सामुदायिक विद्यालयहरुमा समेत यस्तो समस्या लामो समयदेखि रहदै आएको देखिन्छ । संस्थागत विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयहरुका अधिकांश विद्यालयहरुमा बर्षोदेखि प्रधानाध्यापकहरुले विभिन्न बहानामा कुर्सी छोड्न नमानेका कयौँ उदाहरणहरु रहेका छन् ।
शिक्षा नियमावलीले प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रधानाध्यापक छान्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर अधिकांश प्रधानाध्यापकहरु दशकौदेखि हेडसरको पद सजिलै ओगटी रहेका छन् । जसको कारण विद्यालयमा शिक्षकहरुबीच गुट–उपगुट सृजना हुने र विद्यालयको पठनपाठनमा समेत असर पुग्ने गरेको विभिन्न उदाहरणहरु देखिदै आएका छन् । यदि प्रधानाध्यापक नै परिर्वतन गर्ने अवस्था आयो भने विद्यालयहरुमा महाभारत हुने गरेका घटनाहरु बाहिर आउने गरेका समेत छन् ।
केही विद्यालयमा योग्यता र विद्यालय हाक्न सक्ने क्षमता भएका शिक्षकहरु हुँदाहुँदै पनि लामो समयदेखि कम योग्यताका जुनियर शिक्षकहरुले सिन्डिकेट शैलीमा राजनीतिक पावरमा विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका घटनाहरु दाङ जिल्लामा रहेका छन् । तर यस विषयमा समेत सरोकार निकायहरु मौन बस्दा यसको असर विद्यालय प्रसाशन र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा समेत पर्ने गरेको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी सूर्यराज घिमिरेका अनुसार यो समस्या दाङको मात्र नभएर पूरै देशभरी यस्तो खालको समस्या रहदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा विद्यालयका अन्य शिक्षकहरुसमेत जिम्मेवारी लिन तयार नहुने र कतिपय विद्यालयमा योग्यता पुगेका शिक्षकहरुको अभाव हुने कारणले यदाकदा यस्ताखालका समस्याहरु आउने गरेका छन् तर अन्य शिक्षकहरु जिम्मेवारी लिन तयार भएको अवस्था र योग्यता पुगेका शिक्षकहरु भएको अवस्थामा भने यस्तो खालको समस्या देखिनु निश्चय नै राम्रो कुरा भने नभएको उनले बताए ।
योग्यता र क्षमता पुगेका शिक्षकहरु पनि जिम्मेवारी लिनबाट टाढा हुन्छन् त्यस्तो अवस्थामा व्यवहारिकता लागू हुँदै आएको छ । क्याम्पसहरुमा यो कुरा लागू भएको देखिन्छ । तर विद्यालयहरुमा भने यो समस्या रहेको छ कारण भनेको राज्यले विद्यालयमा पूरै दरबन्दी पठाउन नसक्नु हो ।
त्यस्तै लामो समयदेखि शिक्षण पेशामा रहेका गुरुजजुर माविका प्रधानाध्यापक विष्णुप्रसाद आचार्यले शिक्षा नियामावलीमामा प्रधानाध्यापक छान्ने व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा प्रयोगमा आउन नसकेको बताए । ‘एउटा प्रधानाध्यापकको पाँच वर्षे आवधिक कार्यकाल हुने गरेपनि विभिन्न समस्याका कारण त्यो व्यबहारमा लागू हुन सकिरहेको छैन’ उनले भने, ‘दाङ जिल्लाको अवस्थालाई हेर्नुहुन्छ भने राज्यले २०५६ सालदेखि शिक्षक दरबन्दी नै दिएको छैन । अर्को कुरा हाल दाङमा २ सय २२ जना माध्यमिक तहमा शिक्षक दरबन्दी रहेको छ त्यै पनि शिक्षकहरु आफ्नो पायक पर्ने विद्यालयमा रहेका छन् ।’
कतिपय विद्यालयहरुमा शिक्षक दरबन्दिनै पर्याप्त छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी शिक्षा नियामावलीमा उल्लेख भएबमोजिम प्रधानाध्यापकहरु चेन्ज हुन सक्छन् । तर पुराना विद्यालयहरुमा यस्तो समस्या केही कम भएपनि नयाँ विद्यालयमा यस्तो खालको समस्या भने देखिदै आएको उनी स्विकार गर्छन् । योग्यता र क्षमता पुगेका शिक्षकहरु पनि जिम्मेवारी लिनबाट टाढा हुन्छन् त्यस्तो अवस्थामा व्यवहारिकता लागू हुँदै आएको छ । क्याम्प्सहरुमा यो कुरा लागू भएको देखिन्छ । तर विद्यालयहरुमा भने यो समस्या रहेको छ कारण भनेको राज्यले विद्यालयमा पूरै दरबन्दी पठाउन नसक्नु हो ।
पशुको कृत्रिम गर्भाधानमा कृषकको आकर्षण
दाङमा एकसाता लकडाउन
यौन समस्यामा खुल्दैनन् महिला
तीन महिने सिपमूलक तालिमको उद्घाटन